Na - arụ ọrụ na anyị - Media na Press | Otu Di na Nwunye
Di na Nwunye maka Uzo bu ndi di na nwunye na-ewu ewu na blog nri ha na-akpali ndi na-agụ ha ka ha na-eme njem site na akuko ifo, nkwari akụ na nyocha nke ugbo elu, nyocha ebe a na-eme ihe n’eziokwu, ntuziaka na-enye aka ma n’uzo ma n’ulo nri, ihe nlere mba di iche, na itinye mkpuchi mgbasa ozi nke ndi mmadu. . Ebumnuche anyị bụ ịgba, nye ike, na ịkwali onye ahụ kwa ụbọchị ịhụ ụwa - n'agbanyeghị ebe ha nọ.
Malite na Disemba 2016, o nweelarị ngwa ngwa na-eso ndị na-agụ akwụkwọ na-eguzosi ike n'ihe bụ ndị tụkwasịrị ndụmọdụ na ndụmọdụ anyị obi, na-akwali ha ịga ebe ọzọ na ezumike ha ọzọ.
Kemgbe ahụ, A Couple for Road emewo ka ndị na-agụ akwụkwọ na ndị na-ekiri ha na-ege ntị kwa ọnwa karịa 100,000 site na mgbasa ozi na mgbasa ozi na saịtị, ma na-aga n'ihu itinye ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ kwa ọnwa.
Ka ọ dị ugbu a, anyị na-emeghe ntinye aka na mmekọrịta mmekọrịta na mgbasa ozi, mkparịta ụka, mmekọrịta njem, ikwu okwu n'ihu, pịa ajụjụ ọnụ na mgbasa ozi mgbasa ozi na nchịkọta ndị ọbịa.
Dị ka Google Analytics, Otu Di na Ntugharị na-ege ntị gụnyere ụmụ nwanyị gụrụ akwụkwọ (55%) na ndị mmadụ (45%) n'etiti afọ 25 na 44.
Ndị na-agụ akwụkwọ anyị sara mbara, ebe 45% na-esite na United States, na ihe karịrị 35% na-eto site na Germany, Spain, Holland, France, na Italy jikọtara ọnụ. Anyị bụ n'ezie nri mba na njem njem blog!
Anyị guzobere na Fort Lauderdale, Florida, ma ewepụtala onwe anyị ngwa ngwa dịka ikike na nri na njem na karịa Mba 150 gburugburu ụwa, ejiri websaịtị tụgharịrị karịa Asụsụ 50. Isi anyị erutewo site na azụ anyị ruo nke gị - n'agbanyeghị ebe ị nọ!
Chọrọ ịhụ ọdịnaya anyị n'asụsụ ndị ọzọ? Lelee anyị German, Spanish, ma ọ bụ ọbụna Greek!
Onye na-aza ajụjụ na Ajụjụ ọnụ
Di na Nwunye maka okporo ụzọ a gosipụtara
Ndụ Ime Obodo
Site na Blog Blog
Ịde blọgụ Superstar site na Nomadic Matt
Ndị njem na-enye obi ụtọ
Ịkpụgharị na Globe
Ọ bụrụ na ị dị njikere ịrụ ọrụ ọnụ, ka anyị malite!